Nageso Sultan Kasim
Nageessoo Sulxaan Qaasim jedhama. Ji’a 4 dura liqii dhala irraa bilisaa (IFB) isin irraa liqeeffadhee tiraaktera qonnaa bitachuuf gaaffii koo baankii keessan oromiyatti kan argamu damee Dodolaatti gaaffii koo dhiyeeffadhee, isaanis gaaffi koo dhageeffatanii mana koo maandisaan ilaalanii, ulaagaalee fiduu qabu hunda akka fidu erga naa godhaniin booda ji’a tokkoon dura dhimma hunda of biraa xumuranii gara garee dhimmi ilaaluu IFB kan head office finfinnee jiru ofii kootii dafee akka naaf dhumatuuf jecha document koo hunda gara keessan geessee ture. Isin garuu document ji’a tokkoo ol isin bira ture approve gootanii gara branch keessaniitti gad naa deebisuu diddanii, kaayyoo fi karoora koo na harkaa fashaleessitanii akka hojii biraas hin hojjanne murtee tokko:- siif kennina ykn lakki ammatti hin argattuu jettanii deebii nuu deebisuu diddaaf guyyaa hunda akka nama daa’ima gabaa gala haadhaa eeguu maaluma naan jedhanii eegaa turee jira. Amma garuu isin irraa abdii kutee, osoo hin jaalatin maallaqa waan dhabeef kaayyoo koo jijjiiruuf dirqamaa jira. Hojjattoota teessan tan damee nu biraa hojjatan guyyaa guyyatti itti deddeebi’ee maaltu haarawa jedhee gaafachaa turee, amma achis deemuu na nuffisiisee jira. Bilbila keessan soqadhee isinii bilbilus nama na jalaa kaasee waa naan jedhu dhabee murtii dhumaa hanga wiixata dhufuutti waan tokko naan jedhuu baannaan waliigaltee isin waliin uume addaan kutee waan biraa hojjachuuf qophiidha.
Ani tiraaktera yaabbadhee olii gadiin deemuufii miti kan naaf bitaa isiniin jedhaa jiru, ittiin hojjadhee of jijjiiruuf ture. Isin garuu yeroo tiraakterri hojii hojjatu kan naa hin kennin yoom naaf kennuuf karoora akka qabdan naaf galuu dide. Kanaaf yoo message kana hin dubbistan taate, ifaajee fi baasii koo hanga ammaa baases bishaan hin obaasinaa gaaffii koo naaf deebisaa.
Stock keessaa konkolaataan jirus na jalaa dhumataa jira sila ta’eef deebii koo wiixatuma gara dameetti bilbiltanii hin deebistan taanaan nagahatti.
OIB:- Baankii ummataa kan jedhamu yoo ummata dhaabbateef dhageeffatee fi gaaffii ummataaf deebii waqtaawaa yoo kenne qofaadha.